Isitudiyo esizimele eMatakana ogwini - I-Airbnb
Isitudiyo esizimele eMatakana ogwini
182 okushiwo abanye
Whangateau, Auckland, i-New Zealand
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Miranda
U-Miranda Ungumbungazi ovelele
Lesi situdiyo sangasese esisanda kulungiswa sizungezwe ihlathi lendabuko endaweni enhle yasogwini- imizuzu eyi-6 ukusuka eMatakana Village naseLeigh, imizuzu eyi-10 ukusuka e-Omaha kanye nemizuzu emi-3 ukushayela usuka eSawmill Brewery kuLeigh Road. 'I-Studio' ihluke ngokuphelele endlini enkulu kule ndawo, etholakala ngaphezulu komgwaqo.
'I-Studio' ibekwe phakathi kwehlathi elihle lendabuko futhi inegceke elingaphandle langasese lapho ungajabulela khona ukudla kwasekuseni noma isiphuzo sangaphambi kwesidlo sakusihlwa, ngaphambi kokuthola impilo yendawo kaMatakana- kungakhathaliseki ukuthi ujabulela enye yezindawo zokudlela eziningi, amakhefi noma izindawo zokuphuza noma ukuhamba ngezinyawo. ezimakethe ezidumile zaseMatakana ngempelasonto.
'I-Studio' nayo iyindawo ekahle yokulala uma uya emshadweni esifundeni saseMatakana. Kukhona indawo yokupaka eyanele kanye nendawo yokujikela yokugibela nokwehlisa amatekisi.
Itholakala kumahektha ayi-1.5, le ndawo inengadi yezithelo egqumeni eliwudengezi kanye nengadi ebanzi, okuhlanganisa nezihlahla zomdabu zasePohutakawa (ezineminyaka engamakhulu ambalwa ubudala) nempilo yezinyoni ehlukile.
4.79 out of 5 stars from 182 reviews
4.79 · 182 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-182
IMatakana iyisifunda sabathandi bewayini, ukudla neminye imikhiqizo yezandla, etholakala eMatakana Farmers Market, Sawmill Brewery & Brick Bay ukubala embalwa.
'I-Studio' iwuhambo lwemizuzu engu-6 ukusuka eMatakana Village, lapho ungathola khona izitolo, indawo yokuphuzela utshwala kanye nesinema yezitolo.
Ngezansi izikhathi zokushayela usuka 'ku-Studio' uya emabhishi namatheku ahlukahlukene, akha ugu olumangalisayo lwesifunda saseMatakana:
I-Matheson Bay- imizuzu emi-5 ukushayela
I-Ti Point - imizuzu emi-5 ukushayela
I-Omaha Beach- imizuzu eyi-10 ukushayela (ukugibela i-paddle)
I-Goat Island - imizuzu eyi-15 (i-snorkelling)
I-Pakiri- imizuzu engu-25 ukushayela (ukugibela ihhashi)
I-Point Wells- imizuzu engu-8 yokushayela
Leigh - imizuzu engu-6 ukushayela
I-Buckletons Beach- imizuzu engu-15 ukushayela
I-Tawharanui - imizuzu engama-30 ukushayela
I love travel, adventures and our beautiful NZ outdoors. Mum to Scarlett and Eddie. Meeting and chatting to guests is my favourite part about airbnb hosting.
Njengababungazi bakho, sizohlangana nawe lapho ufika, noma sishiye imiyalelo kanye nokhiye ngaphandle, kuye ngesikhathi sakho sokufika. Sizotholakala ukuze sikusize ngemibuzo ongase ube nayo ngesikhathi uhlala futhi sikunikeze ulwazi mayelana nesifunda.
Njengababungazi bakho, sizohlangana nawe lapho ufika, noma sishiye imiyalelo kanye nokhiye ngaphandle, kuye ngesikhathi sakho sokufika. Sizotholakala ukuze sikusize ngemibuzo ongas…
UMiranda Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Whangateau namaphethelo